Mponina maneran-tany taona 2017 : mibaribary ny elanelana eo amin’ny mahantra sy ny mpanana | NewsMada
Mponina maneran-tany taona 2017 : mibaribary ny elanelana eo amin’ny mahantra sy ny mpanana
10 ny toromarika navoitran’ny UNFPA fa tokony harahin’ny firenena raha tiany ny hahatratra tontolo manana vahoaka samy mahita ny anjara masoandrony.
Nampahafantarina, omaly teny Anosy, ny tatitra momba ny mponina maneran-tany ataon’ny Tahirin’ny Firenena mikambana momba ny mponina (UNFPA) isan-taona. Navoitry ny tatitra ny tsy fitoviana mitranga amin’ny vehivavy sy ny ankizivavy raha mitaha amin’ny lehilahy amin’ny sehatra maro. Niompana amin’ny « Fahasalamana sy ny zo momba ny fiterahana ao anatin’izao fotoana isehoan’ny tsy fitoviana izao » ny lohahevitry ny fanadihadiana.
Voalazan’ny tatitra fa mibaribary ny tsy fitoviana eo amin’ny mahantra sy ireo mpanefoefo amin’ny firenena maro. Amina miliara ny olona tsy afaka misitraka akory ny zo fototra maha olona noho ny fahasahiranana mianjady aminy. Tsy voahaja, araka izany, ny fifanarahana iraisam-pirenena momba ny zon’olombelona. Miseho amin’ny endrika maro ny tsy fitoviana : eo amin’ny maha lahy na maha vavy, ny toeram-piaviana, ny tambanivohitra sy ny mponina amin’ny tanàn-dehibe… Mety hampihemotra ny firenena an-dalam-pandrosoana ny tsy fitoviana goavana eo amin’ny fari-piainan’ny vahoaka ao aminy.
Mifampiankina amin’ny fandrosoan’ny toekarena ny fivoarana amin’ny fahasalaman’ny mponina amin’ny firenena iray. Tsy afaka mahazo tolotra momba ny fahasalamana mifanaraka amin’ny filany akory ny ankamaroan’ny vehivavy izay mandrafitra ny 20%-n’ny olona tena mahantra. Maro amin’izy ireo no tsy afaka mandrindra fiterahana akory ka lasa mitondra vohoka aloha loatra raha mitaha amin’ny vehivavy sasany.
Misy toromarika 10 hampihenana ny tsy fitoviana eo amin’ny mponina maneran-tany ary tokony harahin’ny firenen-drehetra.